Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada oo Jawaabay Culus u diray Midowga Musharixiinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada oo Jawaabay Culus u diray Midowga Musharixiinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada ayaa ka dalbaday Midowga Musharixiinta inay keenaan caddeymo muujnaya in Guddigu hor istaagay qabashada Dacwado iyo go’aano u guddiga gaaray oo aan loo marin habraacin loo dajiyay.
Qoraal ay soo saareen maanta Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ayaa lagu sheegay in ay xasuusinayaan soo dacwoodayaasha Doorashada muddada soo Gudbinta Dacwooyinka cabashooyinka la xiriira saxsanaanta guddiga soo xulista ergada (odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka) lagu soo gudbinayo Saddex maalmood gudahood oo ka bilaabaneysa marka ay Guddiga Maamulaya Doorashada (SEIT) ay shaaciyaan magacyada Nabadoonada iyo xubnaha Bulashada rayidka kursi walba.
“Cabashooyinka la xiriira hab qaybsiga iyo kala shaandheynta ergooyinka waxaa lagu soo gudbinayaa Saddex maalmood gudahood oo ka bilaabaneysa marka la shaaciyo liska ergada kursi kasta ayaa lagu yir” Qoraalka Guddiga xalinta khilaafaadka.
Sidoo kale guddigu waxaa ay sheegeen Cabashooyionka la xiriira diiwaangalinta musharixinta iyo ku dhawaaqida liiska musharixiinta la soo gudbinayo marka la shaaciyo liiska musharixiinta kursi kasta oo ah ka hor 48 saac xiliga doorashada kursigaas.
“Marka la qabto Doorashada kursi kasta waxaa lagu gudbinayaa cabashooyinka la xiriira natiijada doorashada kursigaas 3-maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka lagu dhawaaqo natiijada horudhaca ah ee kursigaas. Haddaba, Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban asagoo tixgalinaya in muwaadiniintu ay xaq u leeyihiin inay fikradahooda si xor ugu cabiri karaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan, hadana Guddiga uma garawsana cabashooyinka warbaahinta oo kaliya la soo mariyo dacwo rasmi ah.
Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa xaqiijiyay inay si rasmi ah u soo gaartay labo dacwo oo Golaha Shacabka ah intii doorashada socotay, waxaana go’aankooda Guddigu u maray hanaanka dhaqanka iyo halbeegyada caalamiga ah ee doorashooyinka, wuxuuna Guddiga uu ku booriyay soo-dacwoodayaasha Doorashada ee buuxiyay shuruudaha dacwo oogashada inay dacwooyinkooda Doorashada ku hagaajiyaan Xafisyada uu guddigu ku leeyahay goobaha deegan doorshooyinka dalka muddada kor ku xusan.
Ugu dambeyn Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ayaa ka codsaday Golaha Midowga Musharixiinta inay keenaan caddaymo muujnaya in Guddigu hor istaagay in uu qabto dacwado iyo go’aano u guddiga gaaray oo aan loo marin habraacin loo dajiyay, waxaana ay u balan qaadeen Golaha Midowga Musharxiinta iyo dhamaan daneeyayaasha doorashooyinka inuu si daahfurnaan leh u hor keeno dacwooyinkii uu qabtay iyo sidii uu ku gaaray go’aanadii uu qaatay markasta oo loo bahdo.
Previous articleDagaalkii dheeraa ee Farmaajo u galay inaysan Dalka Doorasho ka dhicin (Qormo xusuus ah)
Next articleFarmaajo oo kasoo laabtay Safarkii Dalka Qatar iyo Dood kulul oo ka dhalatay Diyaaradii uu la socday